बालुवाटार ‘सेल्फ आइसाेलेसन’ मा प्रधानमन्त्री, आरामसँगै चाहेका व्यक्त्ति बाेलाउँदै बिफ्रिङ – Health Post Nepal
२०७६ चैत १५ गते १२:४८
प्रधानमन्त्री केपी ओलीले तीन दिनअघि आफ्नो व्यक्तिगत ट्वीटर अकाउन्टमा लेखे- म त घरमै बसेर सरकार सञ्चालन गरिरहेको छु। तपाईंहरू पनि घरमै बस्नुहोस्।
उनले ट्वीटरमा ‘हामी सबै लकडाउनमा छौं, घरमै बसौं अर्को निर्णय नभएसम्म’ भनी लेखेका थिए।
ओलीले त्यसको भोलिपल्ट फेरि ट्वीट गरेर चिकित्सक तथा प्राविधिहरूलाई ढाडस दिएका थिए। त्यसै दिन राति प्रधानमन्त्री ओली मुटुको धड्कन बढेर अस्पताल भर्ना भए।
We all are under lockdown
Till the next announcement !#COVID_19Nepal #बन्दबन्दीमा_नेपाल pic.twitter.com/08K3ETocwG
— K P Sharma Oli (@kpsharmaoli) March 25, 2020
दुई तिहाइ सरकारको प्रधानमन्त्रीको रूपमा ओलीले प्रधानमन्त्रीको अफिसियल ट्वीटरमा भने कोरोना संक्रमण र लकडाउनपछिको अवस्थाबारे केही सार्वजनिक गरेका छैनन्।
ओली के गरिरहेका छन्? आफ्नो आधिकारिक च्यानलबाट नबताएकाले देशले कोरोनाको महासंकट झेलिरहँदा प्रधानमन्त्रीको सक्रियता खोजी हुन थालेको छ।
तर, प्रधानमन्त्री ओलीको अहिले स्वास्थ्य अवस्था राम्रो छैन। उनी बालुवाटारमा सेल्फ क्वारेन्टाइनमा बसिरहेका छन्। प्रधानमन्त्री ओलीले कोरोनासँग जुध्नका लागि सरकारको तर्फबाट उपप्रधान एवम् रक्षा मन्त्री ईश्वर पोखरेल नेतृत्वको उच्चस्तरीय समितिलाई सक्रिय गराएका छन्।
प्रधानमन्त्री आफैं बैठक तथा सक्रिय छलफलमा छैनन्। आवश्यकताअनुसार उनी पोखरेल, मुख्यसचिव तथा नेताहरूसँग परामर्श गर्छन्, निर्देशन दिन्छन्।
बालुवाटार स्रोतका अनुसार लकडाउनभन्दा अघि प्रधानमन्त्री ओलीले मन्त्रिपरिषद बैठक बसाए। देश र जनताका नाममा सम्बोधन गरेका थिए।
त्यसयता प्रधानमन्त्रीले आधिकारिक च्यानलबाट कोरोना महामारीबारे केही बताएका छैनन्।
‘उहाँ बालुवाटारमै बसेर ब्रिफिङ लिइरहनु भएको छ, उपप्रधानमन्त्रीज्यू, मुख्यसचिव, नेता तथा आफूले चाहेको व्यक्ति बोलाएर छलफल गरिरहनु भएको छ,’ प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार सूर्य थापा भन्छन्, ‘आवश्यकताअनुसार प्रधानमन्त्रीले सक्रिय रूपले नै काम गरिरहनुभएको छ।’
बालुवाटार स्रोतका अनुसार पछिल्लोपटक अस्पतालबाट फर्केपछि प्रधानमन्त्री आराम गरिरहेका छन्। ‘अस्पतालमा हुँदा माधव नेपाल र पुष्पकमल दाहाललाई भेट्नुभएको थियो, त्यतिबेला उच्च राजनीतिक तहमा केही कुराकानी भएको थियो,’ थापाले भने, ‘त्यसयता उहाँले ब्रिफिङ लिइरहे पनि भेटघाट कम नै छ।’
देश कोरोना संक्रमणको जोखिममा रहँदा प्रधानमन्त्री मिर्गौला प्रत्यारोपणका लागि त्रिवि शिक्षण अस्पताल गएका थिए। त्यहाँबाट फर्केपछि केही दिन आराम गरेर प्रधानमन्त्रीले मन्त्रिपरिषद बोलाए, राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गरे।
प्रधानमन्त्रीलाई अहिले आराम गर्न डाक्टरले सल्लाह दिएका छन्। भर्खरै मिर्गौला प्रत्यारोपण गरेर फर्किएका हुनाले प्रधानमन्त्रीलाई सक्रिय रूपमा काम नगर्न चिकित्सकले सल्लाह दिएका छन्। प्रधानमन्त्रीको उपचारमा संलग्न निजी चिकित्सक टोलीले भने पछिल्लो स्वास्थ्य अवस्थाबारे जानकारी दिइरहेको छैन।
प्रधानमन्त्रीले अनुरोध गरेजस्तै जनताले ‘लकडाउन’को पालना गरिरहेका छन्। ‘लकडाउन’को पाँच दिन बित्दा नेपालमा चार जना व्यक्तिमा कोरोना सक्रमण देखिएको छ।
फ्रान्स, कतार र दुबईबाट आएका मान्छेमा कोरोना संक्रमण भेटिएको छ। ती व्यक्तिको सम्पर्कमा रहेका सबै व्यक्तिहरू (जहाजमै आएकाहरू)लाई पनि सरकार पत्ता लगाउन सकेको छैन। उनीहरूसँग सम्पर्कमा रहेका व्यक्ति सबैको स्वास्थ्य परीक्षण भइसकेको छैन।
देशमा ७५३ स्थानीय निकाय छन्। प्रदेश सरकार छ। संघीय सरकार आफैं कोरोनासँग लड्न सक्रिय लागिरहेको बताइरहेको छ। देशबाट दायाँ-बायाँ हुन नसक्ने स्थितिमा पनि सरकार ती व्यक्तिलाई समयमै सम्पर्कमा ल्याउन सक्षम देखिएको छैन।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री भानुभक्त ढकालको सचिवालय भन्छ, ‘संख्या आइसकेको छैन। लगभग सबैको टुंगो लागेको छ। उनीहरू निगरानीमा छन्, परीक्षण र क्वारेन्टाइनमा छन्।’
देश ‘लकडाउन’ घोषणा गरेर महामारी बढ्न नदिए पनि कोरोनामा सरकारको आवश्यक तयारी भने कमजोर देखिएको छ। राजधानीबाहिर कोरोना संक्रमणको परीक्षण पुर्यााउन नसकेबाट पनि सरकारको कोरोनासँग जुध्ने तयारी फितलो छ भन्ने देखाएको छ।
‘फ्रान्स र कतारबाट आएका कति जनालाई खोज्यौं, तीसँग सम्पर्कमा रहेका कति व्यक्ति परीक्षणमा ल्याउन सक्यौं भनी सरकारले यकिन गर्न सकेको छैन, ती व्यक्तिको सम्पर्कमा रहेका व्यक्तिहरू धेरैलाई भोलि कोरोना देखियो भने सरकारले कहाँ कसरी परीक्षण गर्छ?,’ पूर्वस्वास्थ्य मन्त्री गगन थापा भन्छन्, ‘टेकु अस्पतालले मात्र परीक्षण गर्न सक्ला र? हामीले विशेष किसिमको डेडिकेटेड अस्पताल कहाँ कहाँ खडा गर्न सक्यौं? यसो हेर्दा सरकारले यी कुरामा सक्षमता देखाएको छैन।’
— K P Sharma Oli (@kpsharmaoli) March 26, 2020
थापाका अनुसार हाम्रोजस्तो मुलुकमा सरकारले ‘लकडाउन’ घोषणा गरेर तयारीको जनाउ दिएर सकारात्मक काम गरेको छ। तर, स्रोतसाधन र पूर्वाधार कमजोर रहेको अवस्थामा ‘लकडाउन’ भएको छ।
‘लकडाउन’को समय लम्बिन सक्ने संकेत छ। पर्यटनमन्त्री योगेश भट्टराई भन्छन्, ‘अहिलेको परिस्थिति हेर्दा लकडाउन लम्बिन सक्छ भन्न सकिन्छ। सरकारले आवश्यक काम र तयारी गरिरहेको छ। तर, सम्पूर्ण स्रोतसाधन परिचालन भइनसकेको अवस्थामा लकडाउन खोल्न समस्या हुन सक्छ।’
पहिलो चरणको ‘लकडाउन’ले नै जनतालाई दैनिक जीवनयापनमा समस्या निम्तिसकेको छ। ‘लकडाउनलाई जनताले साथ दिएका छन्, अहिले उनीहरू समस्यामा पर्न थालेका छन्। समय थपिँदा सर्वसाधारणको दैनिक जीवनयापन कठिन हुनसक्छ। जनताको समस्यामा सरकारले कति साथ दिइरहेको छ र दिने संयन्त्र निर्माण गरेको छ भन्ने प्रश्न उठ्छ,’ पूर्वस्वास्थ्यमन्त्री थापाले भने।
उनका अनुसार सरकारले अहिले गर्ने तयारीले कोरोना निमिट्यान्न हुने बेलासम्मलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने देखिन्छ। कोरोनाको भ्याक्सिन नआएसम्म सरकारले परीक्षण र कोरोनासँग जुध्ने ‘सिस्टम’ विकास गर्नुपर्ने देखिन्ट्टछ।
‘उपप्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा रहेको समितिले प्रभावकारी रूपमा समन्वय गर्न सकेको छैन। स्वास्थ्यकर्मीलाई पर्याप्त स्रोतसाधन छैन,’ थापाले भने।